MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 01 March 2009
PEOPLE IN WIRE
- ဇော်ထိန် -
( click the scan picture to see words of poem clearly)
လင်းသစ်ရောင်စဉ် - စိတ်ယဉ်ကျေးမှုလှိုင်းများ စာအုပ်တိုက်မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 6.3.090COMMENTS
THE RICH POOR BURMA
ဆင်းရဲမှု နွံဗမာထဲက ဆင်းရဲသူ၊ ဆင်းရဲသားတွေ
အဟုတ်တကယ် ဆင်းရဲကြောင်းကို ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုလုပ် သိလာပါ့မလဲ
ဆင်းရဲမှုအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာနာ-သနား-မေတ္တာထား-ကူညီကြပါ့မလဲ
လွတ်လွတ်လပ်လပ် မဆင်းရဲရရှာတဲ့ဘ၀...။ ။
Weekly Eleven News Journal, No. 20, Vol. 4, Feb, 25, Wednesday, 2009 မှ အောက်ပါသတင်းအရ အထက်ပါကဗျာအားရေးသည်။
News Source: http://www.weeklyeleven.com/ant001/l_ant001.php?id=7
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 2.3.090COMMENTS
Labels: MY POEMS, OTHERS' NEWS